A New Book Published Today! – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 10 August 2009 13 August 2009 Categories Excerpts
5 thoughts on “A New Book Published Today!”
10 August 2009 at 9:51 am
DHL နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ Skypak နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပေးမယ်လေ။ စာအုပ်ဖိုးက တစ်ဒေါ်လာခွဲ။ ပို့ခက ၄၈ဒေါ်လာခွဲ၊ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅၀သာ စာအုပ်တိုက်ကို ရောက်အောင် ပို့ပေးလိုက်နော်။
10 August 2009 at 6:42 pm
အားမငယ်ပါနဲ့ စလုံးရောက်ရင် ခြောက့်ကျပ်ဖြစ်ပြီး။ ၄၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်သွားမှာပါ။
10 August 2009 at 6:46 pm
ဖြန့်ချီရေးကလည်း ညံ့လိုက်တာ. ရပါတယ်ခင်ဗျာ. လိပ်စာ ကလေးသာ မစပါ ဆိုပြီး. စာတို့ကိကြိးကို တပည့်တစ်ယောက် ကိုလွတ်။ registered လုပ်ချင်လုပ် မလုပ်ချင်လဲနေ။ လိပ်စာနဲ့ပို့ပေးလိုက်ရတာဘဲ။ပို့ခတော့ ယူပေါ့။ နဲနဲ နဲနဲ လူပင်ပနးပေမဲ့ marketing က ဒီလိုဘဲ လုပ်ရမှာပေါ့။ များလာတော့ကိုက်လာမှာပေါ့။ ခြေလှမ်းဆိုတာ တစ်က စရတယ။် ဘဝင့် မြင့်ပြီးသားဆိုတော့ အောက်ကို မချနိုင်ဘူး။
10 August 2009 at 8:04 pm
ဆရာမကြီး ဒေါ်ခေအိုအယ်(မ်)ခင်ဗျား… ဆရာမကြီးက သိပ်ဆရာမကြီးလုပ်ချင်တာပဲနော်။ စာတိုက်ကြီးကနေ စာအုပ်ပို့ရတာ ခင်ဗျားလမ်းဘေးမှာ ပေါက်စီတစ်လုံးနဲ့ ရေသန့်ဘူးတစ်ဘူးနဲ့ တစ်ကိုက်စီစားသလောက် မလွယ်ဘူးခင်ဗျ။ အဲလောက်လွယ်မှတော့လေ… ဟင်းဟင်း… ကိုမဆလာရယ်… ခင်ဗျားမို့ဗျာ…
Previous Previous post: ဖက်ခွလုံး
Next Next post: Let’s Open Our Mind’s Eye